Bio Archives - News @ M-Media
မာတင်လူသာကင်း ဂျူနီယာကို တရုတ်ပြည် ပို့ဆောင်ခဲ့သူ (သို့) ဦးဝီရသူကို ကမ္ဘာနဲ့ ထပ်မံ ထိတွေ့ပေးသူ
မတ် ၈၊ ၂၀၁၄ M-Media ရေးသူ- ခင်မောင် Who is Kevin McKiernan ? ကယ်ဗင် မက်ကင်နာ ဘယ်သူလဲ? အနှစ် ၃၀ အတွေ့အကြုံရှိ သက်တော်ရှည် သတင်းထောက်၊ စာရေးဆရာ၊[Read More…]
March 8, 2014 — နိုင်ငံတကာသတင်း
မတရား ဖမ်းဆီးထောင်ချ ခံထားရသည့် ဦးကျော်လှအောင် အကြောင်း တစေ့တစောင်း
ဇန်နဝါရီ ၅ ၊ ၂၀၁၃ M-Media ဦးကျော်လှအောင် (ရခိုင်-မွတ်စလင်) ၏ ဘဝတစ်လျှောက်တွင် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည့် မတရားမှု တချို့ ဦးကျော်လှအောင်သည် စာရေးတစ်ဦးအဖြစ် စစ်တွေခရိုင်တရားမရုံး နှင့် စက်ရှင်တရားသူကြီးရုံးတို့တွင် ၁၉၆၁-ခုနှစ်မှ စတင် အမှုထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။[Read More…]
January 5, 2014 — သတင်းဆောင်းပါး
ဦးဘချို (၁၈၉၃ – ၁၉၄၇)
ဇူလိုင်-၁၆၊ ၂၀၁၃ M-Media အာဇာနည်များ အထ္ထုပ္ပတ္တိ (အာဇာနည်နေ့ အထိမ်းအမှတ်) ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၁၉)ရက်နေ့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများကျဆုံးခဲ့တဲ့ နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအပါအ၀င် ဦးဘ၀င်း၊ မန်းဘခိုင်၊[Read More…]
July 15, 2013 — သုတ၊ရသ, ဆောင်းပါး